स्वतन्त्र नारी : बोक्सीको आरोप ! सुखभोगको साधन !
Tue, Jun 19, 2018 | 17:59:37 NST
15:16 PM ( 1 year ago )
Total Views: 4.7 K
अप्तोपुरुष भन्दछन्, हरेक व्यक्ति आफैंभित्रै स्त्री र पुरुषको समायोजन हो । हाम्रो शरीर पनि शुक्र र शोणितको मिलनले बनेको हुन्छ । वैज्ञानिक पनि यही भन्दछन् ।
हाम्रो संस्कारमा पनि अदियोगी शिवलाई अर्धनारी को संज्ञा दिइएको छ । भनिन्छ, पुरुष उर्जा पुरुषार्थको प्रतिक हो, बल, पराक्रम, आक्रोश र विध्वंसको प्रतिक हो, र महिला उर्जा सृस्टि, रचना, धैर्य र प्रेमको ।
पितृसत्ताको तीन हजार वर्षको इतिहासमा पाँच हजार वटा युद्ध भए । हाम्रो इतिहासका सबै पाना हत्यारा र शोषकका चित्रले भरिएका छन् । जसलाई हामी भगवान मान्दछौं । अनौठो छ, यदि बल र पुरुषार्थलाई मात्रै जीवन चलाउने माध्यम मान्ने हो भने पक्कै पुरुषको सत्ता चल्ने छ । लाखौं वर्षदेखि जस्तै महिलाको दमन हुनेछ । हाम्रो समाजको अहमको मुढताले गर्दा कति महिला बुद्ध र आइन्स्टाइन दबिए होलान् वा अझ कति शीर्ष व्यक्तिले फूल्ने मौका पाएनन् होला ।
हजारौं वर्षको निन्दा छ । न महिलालाई बोक्सीको आरोपमा जलाउने कसुर बाँकी छोडियो, न मायाको खेल भनेर सुखभोगको साधन बनाउन थाँती राखियो ।
निकै दुर्भाग्यको कुरा हो कि हामी सुन्दर भिन्नतालाई मतभेदको आधार बनाउछौँ । सामान्य फरकलाई सत्ता र दमनको खेल बनाइदिन्छौँ । यो प्रसंगमा चाँहि डार्विनको सिदान्त बडो घातक ठहरिन्छ, साचैंनै हामी बाँदरकै सन्तान हौँ तर अब प्रश्न सत्ता र दमनको खेलको होइन । प्रश्न सन्तुलित जीवनको हो, प्रश्न सुन्दर संसारको हो ।
महिला हिंसा रोकियो । पक्कै रोकियो । तर कानुनमा मात्रै, पानामा मात्रै । सामाजिक यथार्थ अलि तितो छ । महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुको पनि आखाँमै देखिन्छ, त्यो मनोवैज्ञानिक तस्करी प्रस्टै देखिन्छ । आफूलाई एक्काइसौं सताब्दीका सर्वश्रेस्ठ प्राणी भन्दै आफ्नै गुणगान गाउने हामीबिच अझैपनि लैंगिक असमानता र नारी हिंसा हुनु निकै लज्जास्पद कुरा हो ।
शिव र शक्ति, यिंग र यांग - दुई ध्रुवको सन्तुलन नमिलेसम्म द्वन्द्व सधैँ चलिरहन्छ । त्यसैले पहिला आफूभित्रको स्त्री उर्जा प्रति सम्मान भाव नजागेसम्म नारी एकता र लैंगिक समानताक बारेमा गरिने भाषण सायदै व्यवहारिक होलान् । नारी दमनको यो सुक्ष्म खेललाई समूल निर्मुल गर्ने जिम्मेवारी हरेकलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस हुन जरुरी छ । जसको लागि पहिला आफैलाई बनाउन जरुरी छ । र हरेक सचेत वर्गले आफूभित्रको चेतनालाई रचनात्मक ढंगले आवाज बनाउन जरुरी देखिन्छ । ताकी कुनै नारीले आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लड्न नपरोस् । नारीलाई लड्न सिकाउन भन्दा केही अबुझलाई फूल्न सिकाउँदा ठिक होला । र महिलालाई किनबेच गर्न मिल्ने बजारको समानको नजरले हेर्नेलाई अगाडिको पांग्रा निकालेर एउटा साइकल दौडमा भिडाईदिनपर्छ । उठाउन् चाहेजस्तै एकपांग्रे दौडको मजा ।
यहाँ नारीजातिले यो सुक्ष्म खेलबाट स्वतन्त्रता पाएको दिन सायद पूरै जगतले नै स्वतन्त्रता पाउने छ र आजको दिन त्यसको प्रतीक हुन सक्छ ।
(लेखक चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थी हुन् ।)